एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित)
एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित)
रोल्पा । एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रो दन देख्दा कसको मन नरोला ? काखमा एक वर्षको बच्चा आमाको पी डामा संगै रोइरहेको छ । घर सानो झुपडी छ, आर्थिक अवस्था विपन्न यि महिलाले एउटै घ ट ना मा दुई साना छोराछोरी गुमाइन् । तीन दिन अघि रोल्पामा भएको ब म वि स्फो टमा आफ्ना दुई सन्तान विमला र विजयलाई गुमाएकी हुन् ।
५ वर्षको छोरा र ११ वर्षको छोरी गुमाएकी यि महिला रुँ दै भन्छिन् ‘एउटा सानो बच्चा छ काखमा अब यो छोरालाई कसरी हुर्काउने ?’ गोठाला पठाएको छोराछोरी वि स्फो टमा गुमेपछि आमाको बेहाल भएको छ । ‘अब सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ गरोस्’ छिमेकीले भनिन् ।
आफुहरुले सोच्ने नसकेको घ ट ना भएपछि अहिले रोल्पमा शो क छाएको छ । सधै ति बालबालिका गोठाला जाने गरेका थिए । घरको काम सघाउन गएका उनीहरुको ब म वि स्फो टमा परी निधन भएको हो । उनका २ छोराछोरी सहित ४ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । २२ वर्षको उमेरमा ३ सन्तानको आमा बनेकी यिनको दुई सन्तानलाई एउटै घ ट ना ले लिएर गयो । महिलाको स्वास्थ्य पनि निकै कमजोर छ ।
‘घरमा पुरुष कोही पनि छैन, मन बुझाउने पनि कोही छैन, महिलाले रुँ दै भनिन् बुवालाई हेर्ने उनीहरुको रहर पनि अधुरै भयो ।’ बुवा रोजगारीको लागि वाहिर रहेका थिए । बुवा आउने खबरले निकै खुसी भएका छोराछोरीको त्यो सपना पनि अधुरो भएको छ ।
नवजात शिशुको के दोष थियो ? कुकुरले बोकेर घरमै ल्यायो, यसरी खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
आफ्ना नागरिक लिन भारतीय सुरक्षाकर्मी यसरी आए नेपाल (भिडियो हेर्नुस्)
महानायक विवादपछि पहिलो पटक रुँदै मिडियामा आइन दीपा श्री निरौला ( भिडियो हेर्नुहोस् )
फेरी यति धेरै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको
जय पाथिभरा माता सबैको कल्याण गर्नुहोस ! भगवानको शक्ति छ यो ठाउमा , १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो (भिडियो सहित)